लक्ष्मी बैंकद्वारा गत वर्षको लाभांश प्रस्ताव, कति छ बोनस सेयर र नगद लाभांश ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको सञ्चालक समितिको आज आइतबार बिहान भएको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने ८९ लाख २० हजार ५०८.६४ कित्ता बोनस सेयर र ५ प्रतिशतले हुन आउने ४४ करोड ६०...
लक्ष्मी बैंकको ११६ औँ शाखा तहाचलमा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ११६ औँ शाखा काठमाण्डौको तहाचलमा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो नयाँ शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको सञ्जाल...
लक्ष्मी बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन खुल्ला, वार्षिक १०% ब्याज पाइने
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमा असोज २३ गते(आज)देखि आवेदन खुलेको छ । बैंकले १००० दरका इकाईहरुको बिक्री खुलाएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत भदौ १७ गते लक्ष्मी बैंकलाई प्रतिइकाइ १ हजार रुपैयाँ दरमा २० लाख इकाइ ऋणपत्र बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१०% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर-२०८६’...
लक्ष्मी बैंकका थप शाखा रंगेली र कपनमा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा ११४औँ शाखा मोरङको रंगेलीमा र ११५औँ शाखा काठमाडौँको कपनमा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ। यी शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यी...
लक्ष्मी बैंकलाई २ अर्बको ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति, सनराइज बैंकको ३ अर्बको ऋणपत्र पाइपलाइनमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले २ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमति पाएको छ । सेबोनले गत भदौ १७ गते लक्ष्मी बैंकलाई प्रतिइकाइ १ हजार रुपैयाँ दरमा २० लाख इकाइ ऋणपत्र बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो । बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१०% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८६’ नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । जसमा कुल...
लक्ष्मी बैंकको ११३ औँ शाखा राजविराजमा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा ११३ औँ शाखा सप्तरीको राजविराजमा संचालनमा ल्याएकोे छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस नयाँ शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८...
चापागाउँमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ११२ औं शाखा ललितपुरको चापागाउँमा संचालनमा ल्याएको छ । यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवा, लकर सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस नयाँ...
लक्ष्मी बैंकले १२% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफा ३३.४३% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १२ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ३३.४३ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
भैंसेपाटीमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १११औँ शाखा काठमाडौँको भैसेपाटिमा संचालनमा ल्याएकोे छ। यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवा, लकर सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस...
काठमाण्डौ । एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबि) को ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (टि एफ पि) तथा नेपालको अग्रणी बैंक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड बीच कर्जा तथा ट्रेड सहयोगको लागि एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । एडिबिको ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम नेपालमा सन् २००९ देखि सञ्चालित रहदैं आएको छ भने यसले नेपालका दुई स्थानीय बैंकहरुसँग सहकार्य समेत गर्दै आएको छ...
पोखराको अमरसिंह चोकमा लक्ष्मी बैंक
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो ११० औं शाखा पोखराको अमरसिहं चोकमा संचालनमा ल्याएकोे छ। यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बंैकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस नयाँ शाखाको साथ लक्ष्मी बैंकको सञ्जाल ४८ जिल्लामा...
तपाईसँग डिजाइन कला छ ? लक्ष्मी बैंकको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नगद जित्न सकिने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले ७ प्रदेशका लागि उपयुक्त भिजा कार्ड डिजाइनको खोजी गर्न क्राउड सोर्सिङको प्रक्रियाद्वारा देशभर खुल्ला प्रतियोगिताको घोषणा गरेको छ । यो प्रतियोगिताको मूल उद्देश्य भनेकै सातै प्रदेशका मौलिक कला, संस्कृति र विषेशता झल्किने र त्यसको परिचय दिने डिजाइनको खोजी रहेको बैंकले प्रष्ट्याएको छ । साथै यस �...
लक्ष्मी बैंकको विशेष अफर: अनलाइन खाता खोल्दा रु. ५०० को मोवाइल ब्यालेन्स
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले Ctrl O नामक डिजिटल माध्यमबाट खाता खोल्ने ग्राहकहरुका लागि विशेष योजना सुरु गरेको छ । एफवान सफ्टसँगको सहकार्यमा संचालित यो योजना अन्तरगत हाल जारी आइसीसी क्रिकेट वल्र्डकप २०१९ को अवधिर Ctrl O मार्फत बचत खाता खोल्दा ग्राहकहरुले रु ५०० बराबरको मोबाइल व्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले बैंकको वेबसाइटमा गई...
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १०६ औं शाखा सन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखा मार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस नयाँ...
लक्ष्मी बैंकका शाखाबाट महालक्ष्मी लाइफको सेवा पाइने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बीमा सेवा दिने सम्बन्धमा एक समारोह बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता अनुसार लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले देशभर रहेका आफ्ना १०६ शाखाहरुबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको जीवन बीमा योजनाहरु बिक्री गर्नेछ। महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले साबधिक बीमा...